खोपको पर्खाइमा नागरिक : RajdhaniDaily.com
सर्वोच्चको लिखित जवाफ: प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलास बाहिर बस्न मिल्दैन
कर्मचारी संगठन कार्यालयमा प्रहरी हस्तक्षेप,एकसय बढी पक्राउ
माधव नेपालले भने: पिलो निचोरेर आनन्द भयो भन्नेले दिनदिनै किन संसद्‌मा कराउने ?
प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित, बैठक ७ असोजसम्म स्थगित
पहिरो अवलोकनमा पुगेका बुटवलका मेयर स्थानियबाट कुटिए
प्रिमियर लिगमा चेल्सी र ला लिगामा रियाल म्याड्रिड शीर्षस्थानमा
ओमानविरुद्ध नेपालको ऐतिहासिक जित
नेपालले आज फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
अनुसन्धानमा परिपक्वता ल्याऊ
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र लोकतन्त्रको सुढृढीकरण
संविधानको मर्म मिच्दै संविधान दिवस !
HomeEditor-Picksखोपको पर्खाइमा नागरिक
खोपको पर्खाइमा नागरिक
कोरोना संक्रमणको जोखिमले आमनागरिक चपेटामा परेका छन् । कोही गम्भीर संक्रमण देखिएर अस्पतालको शय्यामा छटपटाउन विवश छन् त कोही होम आइसोलेसनमा छन् । कोरोनाको पहिलो लहर सकिएलगत्तै नेपालमा दोस्रो लहरले नराम्ररी प्रभावित पारेको हो । यस्तो अवस्थामा आमनागरिक खोपको पर्र्खाइमा छ । सरकारले सबैलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आमनागरिकहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् त्यसैले उनीहरू चिन्तित छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अनुदान, खरिद प्रक्रिया र कोभ्याक्स फ्यासिलिटजमार्फत नेपालमा अहिलेसम्म ३९ लाख मात्रा खोप भित्रिएको छ । अनुमानित २२ लाख नागरिकले खोपको पहिलो मात्रा मात्रै लगाएका छन् । यस्तै, अनुमानित ४ लाख नागरिकले मात्रै खोपको दुईवटा मात्रा लगाएका छन् ।
सरकारले २०७८ पुस मसान्तसम्म आमनागरिकमा खोप पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी पुस मसान्तसम्म २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ ।
२ करोड १३ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ नागरिक खोपको प्रतीक्षामा छन् । खोप लगाउन योग्य जनसंख्यामध्ये २२ लाखले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् ।
खोप लगाउने लक्षित जनसंख्यामध्ये ठूलो संख्यामा नागरिकहरू खोपको आशामा छन् । कहिले खोप लगाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठोस जवाफ दिन सक्छ न त सरकारी अधिकारीले नै । सरकार कुन देशले खोप दिन्छ ? अनि लगाउने अभियान थालौंला भनेर कुरिरहेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप किन त ? खोप विज्ञ भन्छन्, ‘कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मृत्यु हुने सम्भावना करोडौंमा एक हुन सक्छ । त्यसैले खोप लगाउनुपर्छ ।’ हालसम्म ३९ लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ । तर, लक्ष्य चुम्न खोपको चरम अभाव छ । अहिलेसम्म जोखिममा काम गर्ने व्यक्तिहरू स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, पत्रकारलाई खोप उपलब्ध गराइएको छ ।
संक्रमणबाट बच्न खोप अपरिहार्य मानिन्छ । खोप विज्ञहरूका अनुसार खोपको मात्रा पूरा भए गम्भीर संक्रमण देखा पर्दैन । खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार खोपले संक्रमण भइहाले गम्भीर असर हुनबाट जोगाउँछ । डा. उप्रेतीले खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई जहिले खोप दिए पनि दोस्रो मात्रा दिइने बताए ।
खोपको आसमा रहेका जनतालाई सरकारले खोप यही गतेबाट यो उमेर समूहलाई लगाउनेछौं भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । कारण अहिलेसम्म कुनै पनि देशबाट खोपको परिमाण सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । कोभ्याक्समार्फत नेपालले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत खोप पाउनुपर्नेहुन्छ । तर, कोभ्याक्स फ्यासिलिटीअन्तर्गत नेपालले हालसम्म ३ लाख ४८ हजार मात्रा प्राप्त गरेको छ । यो निकै न्यून मात्रा हो ।
कोभ्याक्सले नेपालको खोप लगाउने जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी १ करोड ३० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बिहीबार मात्रै अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स फ्यासिलिटीअन्तर्गत नेपाललगायत देशलाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, कति मात्रा उपलब्ध गराउने परिणाम खुलाइएको छैन । यस्तै चीनबाट अनुदानस्वरूप उपलब्ध भएको थप २ लाख डोज अझै आएको छैन ।
खोप प्राप्तिका लागि सरकारले अमेरिका, चीन, रुसलगायतका देशलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आए पनि अझै कति मात्रामा खोप आउने भन्ने सुनिश्चितता छैन । खोप उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएका देशले सकारात्मक जवाफ दिए पनि ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
कम आय भएका मुलुकमा अति न्यून कोरोना खोप पुगेको छ । अधिकांश खोप यसअघि नै धनी मुलुकले खरिद गरिसकेकाले विपन्न राष्ट्रको पहुँच खोपसम्म पुग्न सकेको छैन ।
केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खोपलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यथाशीघ्र खोप ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताए । अहिले धनी मुलुकहरूले लाखौं डोज खोप आफ्ना नागरिकका लागि खरिद गरिसकेका छन् ।
कम आय भएका मुलुकमा निकै कम मात्रामा कोरोना खोप पुगेको छ । अधिकांश कोरोना खोप यसअघि नै धनी मुलुकले खरिद गरिसकेकाले गरिब देशको पहुँच खोपमा पुग्न सकेको छैन ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस आजदेखि १८ वर्ष माथीका उमेर समुहले भाेराेसेल खाेप लगाउन पाउने
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कोरोना खोप कार्यक्रम विश्वका देशहरूबीचको असमान दौड बन्न पुगेको छ । यो मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ ।’ खोपका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि सुनिश्चित गरेको छ । हाल नेपालमा कोभिसिल्ड र भेरोसिल खोप उपयोगमा आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका ९ लाख ११ हजार ३ सय ४२, ज्येष्ठ नागरिक ५१ लाख ६४ हजार २ सय ६९, ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका २९ लाख १ हजार १ सय चार, १५ देखि ३९ वर्षका बाँकी सबै १ करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनालाई खोप लगाउने योजना छ ।
भारत सरकारले नेपालले खरिद गरेको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप दिन नसक्ने बताएपछि साढे १३ लाख व्यक्तिले तत्कालै दोस्रो डोज लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने बताए ।
सरकारले गत फागुन २३ गतेपछि देशभरमै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउने अभियान थालेको थियो । यस्तै, १४ जिल्लामा ५५ वर्ष माथिका व्यक्तिलाई पनि खोप लगाउन थालिएको थियो । कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका गरी साढे १३ लाख व्यक्तिले तत्कालै दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारले ती व्यक्तिलाई अहिलेकै अवस्थामा खोप उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस तालिवानले ब्युँतायो दण्ड मन्त्रालय, दोषीको हात काट्नेदेखि अंग छेदन गरिने
खोपको पहिलो मात्रा लगाएको ८ देखि १२ हप्तासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्नेहुन्छ । तर, दोस्रो डोज लगाउने समय घर्किए पनि भारतीय कम्पनीबाट खोप प्राप्त हुन सकेको छैन ।
डा. पोखरेलका अनुसार कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोप प्राप्त गर्ने विषयमा दाताहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र प्रयोग गरेर खोप प्राप्तिका लागि प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना सहकक्षीमार्फत् भारत, चीन, अमेरिकालगायतका देशमा खोप प्राप्तिका लागि कुराकानी भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप ल्याउन आफ्नो तर्फबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।
यस्तै, कोभ्याक्स फ्यासिलिटीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले समय–समयमा देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल नभई नहुने खोपबारे, महामारीको अवस्थाबारे जानकारी गराएर पत्राचार गरिसकेको डा. पोखरेलले बताए । यद्यपि कहिलेसम्म, कति खोप आउने भन्ने यकिन जानकारीसहितको पत्र आएको छैन ।
सरकारले १४ जिल्लामा ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई र अन्य बाँकी जिल्लामा ६५ वर्ष माथिका नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाएको थियो । सो खोप लगाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १२ हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउन भनेको थियो ।
फागुन २३ भन्दापछि खोप प्राप्त गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा नागरिकले खोप लगाउने मिति नजिकै आउँदा पनि, अहिलेसम्म तत्कालै कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने सम्भावना छैन । करिब साढे १३ लाख नागरिकलाई दोस्रो मात्रा लगाउन कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनिका वा एस्केबायो एउटै प्रकृतिको खोप उपलब्ध गराइदिन पहल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतमा १६ हप्तासम्ममा पनि खोप लगाउँदा त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुँदैन र रोगबाट बचाउन मद्दत पु¥याउँछ भनेर प्रमाणित भएको देखिएको छ ।
केही स्थानीय तहले खोप खरिद गर्ने पनि बताएका छन् । तर, सबै स्थानीय तहले आफैंले खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया, भण्डारण, प्राविधिक कुरा, कोल्डचेनको व्यवस्थापन र त्यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
संक्रमणदर केही दिन कम देखिए पनि यसबाट बच्न खोप अन्तिम विकल्प रहेकाले सरकार खोप खरिदमा तनमन भएर लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।
निराजन पौडेल - September 21, 2021
भविन कार्की - September 21, 2021
काठमाडौ । नेकपा एमालेले पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । १५–१७ असोजमा आयोजना हुने प्रथम...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनी लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश...
दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामाग्रीका उच्च आयातको निराशाजनक निर्यातले देश ग्रस्त रहेको छ । फलस्वरूप देश आयातमुखी चर्को रूपमा बढ्दै छ । स्वदेशी उत्पादन...
देउवा निकम्मा भए कांग्रेसलाई डुबाए : डा. सुन्दरमणि दिक्षित
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालको ईतिहासकै निकम्मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गरेका छन् । शनिवार राजधानीमा आयोजित एक...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन बाँकी रहँदा १३ जिल्लामा वडा तहको अधिवेशनको कार्यतालिका फेरि परिवर्तन हुने भएको छ । कांग्रेसले पहिलो चरणमा...
काठमाडौं । २ जेठ २०७५ मा फर्कने १० बुँदे सहमतिअनुसार एमालेको बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् ।...
काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले फुट र जुटको अनुभव भएको एमाले सुदृढ बनाउन चारवटा सुझाव दिएकी छन् । बिहीबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा...
काठमाडौं । नेपालीहरूको मुख्य पर्व दसैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यकाबाट गाउँ जानेहरूका लागि सरकारले यातायातको सहज व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आगामी...
पारा खेलाडीलाई एभरेस्टको सहयोग
काठमाडौं । एभरेस्ट तेक्वान्दो डोजाङले विपन्न तथा पारा खेलाडीलाई नगद तथा खाद्यान्न सामग्री वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । डोजाङले पारा तेक्वान्दोका पाँच जना...
मन्त्री नै बस रिजर्भ गर्दै मजदुर घर पठाउँदै
उच्च ज्वरो आएको बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेपछि बाटैमा मृत्यु
१ लाख बढी आउटसोर्सिङ कामदारको रोजगारी गुम्यो
सवा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर तत्काल आउने
प्रजनन् अधिकार सम्वन्धि ऐन कागजमा सिमित
तपाइलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखियो ? यी नम्बरमा फोन गर्नुस् निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पाइन्छ
थप १२५ जना कोरोना संक्रमित
यी लक्षण देखिएमा हुन सक्छ अल्जाइमर्स
राजनीति कसका लागि ?
सागर पण्डित - September 17, 2021
प्रचण्ड असल बाबु, काका, ससुरो, सम्धी हुन्, तर उनी धोकेबाज र छट्टु नेता हुन् : ओली
राजधानी समाचारदाता - September 14, 2021
एजेन्सी - September 15, 2021
दशैं आइसक्याे, हलमा नयाँ फिल्म कहिले ?
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जुट्दै युनेस्को